Salady ovy miaraka amin'ny salmon, paoma ary fromazy nokapohina | Recipe ao an-dakozia
Maria vazquez | 06/05/2021 09:30 | Nohavaozina amin'ny 06/05/2021 13:30 | Salady
Niova ny nahandro nahandro rehefa niova ny fizaran-taona. Ary mankafy ny mari-pana mahafinaritra tahaka antsika, fomba fahandro amin'ny fahavaratra toy ity salady ovy misy salmon, paoma ary fromazy nokapohina ity dia misongadina ho safidy tsara. Safidy mamelombelona ho an'ny fianakaviana iray manontolo!
Salady ovy tena tsotra ny manomana azy ireo. Raha mahita lavitra isika ary mahandro ny ovy mialoha, ho fanampin'izay, tsy misy manakana antsika tsy hanao drafitra amin'ny maraina sy hankafy azy ireo. Ary rehefa tonga any an-trano isika dia ny mitetika sy mifangaro ihany no tsy maintsy ataontsika. Ny fandrahoan-tsakafo amin'ny fahavaratra dia tena mora, indrindra amin'ny fomba fahandro tsotsotra toa ny an'ny Princess amandine.
Ianao ve mila fika hanomanana ity lovia ity haingana kokoa? Tsy mila manaraka ny dian'ny Montse mpiara-miasa amiko fotsiny ianao handrahoana ovy amin'ny microwave. ny fika mety ho an'izay tsy dia lavitra izany dia hampirisika anao hivoaka bebe kokoa amin'ity appliance ity. Ary tena madio, satria vilia baolina fotsiny no ilainao.
Afaka manaova fiovana isan-karazany ato amin'ity salady ity mba hampifanaraka azy amin'ny tsirinao sy amin'ny pantryo. Azonao soloina salmon mifoka ny salmon vaovao, amin'izay manampy proteinina betsaka kokoa ao anaty lovia, na manandrana ny fromazy nokapohina amin'ny zava-manitra isan-karazany toy ny thyme na coriander. Na soloy ny fromazy nokapohina amin'ny crème an-dakozia maivana aza, yaourt grika na yaorta voajanahary voajanahary raha mitady safidy maivana kokoa ianao. Tsy ho an'ny fahafaha-manao zavatra izany!
1 Ny fomba fahandro
2 Ny maha-zava-dehibe ny akora tsara
Ny salady ovy misy salmon misy setroka, paoma ary akanjom-bifotsy nokasaina hataonay anio dia tena lavorary hamenoana ny menusanao amin'ny fahavaratra.
Ovy andriambavy Princess 2 lehibe
Salmon setroka 3
Fromazy kapoka 1 vera
Rantsana rosemary vaovao
Nasiantsika rano masira betsaka ao anaty vilany ary andraho ny ovy mandritra ny 20 minitra.
Rehefa afaka 20 minitra isika dia manamarina raha vita izy ireo ary esorina amin'ny rano mba hangatsiaka. Raha vao mangatsiaka ny peel ary tapatapaho.
Aorian'izay dia atambatra ao anaty lovia ny ovy miaraka amin'ireo salmon voatetika sy ireo paoma voakiky. Ataovy ao an-tsaina fa mety hanala oksidra ny paoma raha manomana azy mialoha ianao, noho izany ny tsara indrindra dia ny manampy azy amin'ny minitra farany.
Etsy an-danin'izany, ao anaty kaopy dia afangaro amin'ny voasarimakirana ilay fromazy nokapohina, ilay rosemary vao notetehina, sira kely iray hafa ary dipoavatra iray hafa.
Manompo ny Salady Ovy Apple Salmon izahay miaraka amin'ny akanjo fromazy nokapohina.
Rehefa mieritreritra ny fahavaratra isika dia tonga ao an-tsaina ireo fomba fahandro maivana sy vaovao miaraka amin'ny tsiro amin'ny citrus. Resipeo tahaka an'io salady ovy io izay hanome anao karibômatôta goavambe sy proteinina kalitao avo lenta noho ny fotony lehibe, miaraka amina fihinana ambany tavy. Sahy manomana azy ve ianao?
Ny maha-zava-dehibe ny akora tsara
Fahita matetika ny mieritreritra fa mora ny manao an'io karazana fomba fahandro io izay tsy dia misy fiomanana firy. Ary na dia marina aza fa tsy saro-pantarina ara-teknika izy ireo, dia ao anatin'ireny fomba fahandro ireny no ahita ny fahasamihafana indrindra rehefa mampiasa vokatra tsara.
Aza atao ambanin-javatra ny herin'ny akora ilaina kalitao, mitadiava salmon tsara ary ambonin'izany rehetra dia misafidy ovy tsara ary azo antoka fa hanisy fiovana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Salady » Salady ovy miaraka amin'ny salmon, paoma ary fromazy nokapohina
Mofomamy kanelina fototra